Pakistana: Ao Quetta, Mandresy Ireo Sakàna Sosialy Ny Fisian’ny Toeram-pisakafoanana Iray Izay Vehivavy Daholo No Mitantana Azy · Global Voices teny Malagasy
Pakistana: Ao Quetta, Mandresy Ireo Sakàna Sosialy Ny Fisian'ny Toeram-pisakafoanana Iray Izay Vehivavy Daholo No Mitantana Azy
Voadika ny 04 Desambra 2017 12:49 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Ελληνικά, Français, Español, русский, Italiano, اردو, čeština , English
Hamida Ali Hazara, ny mpiasany sy ireo mpanjifan'ny Trano Fisakafoanana Hazara, tananan'i Hazara ao Quetta. Fahefatra avy aty ankavia no misy an'i Hamida. Sary navoaka teo amin'ny pejy Facebook-n'i Hamida Ali Hazara. Fampiasana nahazoana alalana.
Tsy hoe tsy fahita firy ireo trano fisakafoanana ao an-tanànan'i Hazara, faritra iray antonontonony ao Quetta, any andrefan'i Pakistana. Saingy misy iray izay mahasarika sy tsy azo odian-tsy hita. Manana famirapiratàna tsotra, ravahan'ny haingo iray hazaragi nentim-paharazana sy sarin'ny Bouddha ngeza be iray ny atin'ilay Trano Fisakafoanana . Fa ny tena tsy mahazatra kosa anefa, dia ny fahitàna hoe vehivavy daholo ireo mpitantana sy mpiasa ao amin'ilay Trano Fisakafoanana.
Ireo Hazara vitsy an'isa dia manana ny fiteniny hazaragi/dari. Mbola mitohy mizaka ireo sotasota tsy mitsahatra ry zareo Hazaras hatramin'ny nandosiran'izy ireo ny fanadiovana ara-poko nataon'ireo talibàna tao Afganistàna, ary nifindra monina tany amin'ireo firenena akaiky azy, Iràna sy Pakistàna.
Miozolomana shiita no finoana arahin'ny ankamaroan'ireo vahoaka avy amin'ny foko hazara. Nanokatra varavarana ho an'ireo vehivavy sy ireo fianakaviana mitady fotoana lafatra ao Quetta, renivohitra ara-pitantanan'ny faritany pakistaney ao Baloutchistan, ny Trano Fisakafoanana Hazara.
Hamida Ali Hazara dia avy ao amin'io vitsy an'isa natao an-jorom-bala io, izy no hery manodina an'io Trano Fisakafoanana maresaka io, izay manolotra ireo haify pakistaney tsy manan-tsahala ny lisitry ny sqakafo ao aminy, toy ny biryani (fangaron'ireo laron-tsakafo, vary sy hena amin'ny ankapobeny), ny karhai (hena matavy atao saosy), kebabs ary ranom-boankazo vao avy nopotserina.
Natao ho an'ireo fihaonana ara-toekarena, ireo fivoriana, fampakarambady ary fety fankalazana tsingerintaona ihany koa ilay toerana vao avy namboarina. Mitontaly enina ny fitambaran'ny isan'ireo vehivavy miasa ao amin'ny Trano Fisakafoanana Hazara.
Probably the first restaurant in #hazaratown, #quetta – owned & designed by a female entrepreneur. Hamida Ali Hazara is breaking barriers. pic.twitter.com/lPhc9m0hVH
— Saba Chaman (@chaman_saba) October 19, 2017
Mety ho ny voalohany Trano Fisakafoanana ao an-tanànan'i Hazara, Quetta, fanànana sy asa famoronana anà vehivavy iray mpandraharaha. Potehan'i Hamida Ali ireo sakana.
Hazara Restaurant is a second home 4 many Hazara women in community. The initiative is changing minds & invading hearts. #HazaraRestaurant
— Riyasat Ali (@RiyasatAlii) October 28, 2017
Trano faharoa ho an'ireo vehivavy hazaras maro ao anatin'ilay vondrom-piarahamonina ny Trano Fisakafoanana Hazara. Manova toetsaina ary tafiditra any am-po ilay fandraisana andraikitra.
Irian'ireo mpanao gazety sy ireo mpikirakira tahirin-kevitra ny hitondra tatitra mikasika ny herimpon'i Hamida Ali Hazara, izay vao avy nanokatra Trano Fisakafoanana iray ao an-tanànan'i Hazara. Tsy faly fotsiny amin'ny fampandehanana ny Trano Fisakafoanana ireo vehivavy miaraka aminy, miasa ihany koa izy ireo sahala amin'ireo mpanakanto sady mampiseho ireo olan'ny vondrom-piarahamonina hazara ao Baloutchistan. Hamida, vehivavy mafàna fo, nanokatra toerana iray natokana mihitsy ho an'ireo vehivavy sy ireo tovovavy any Baloutchistan mba hanomezana toerana iray ho azy ireo hifanakalozana hevitra sy hanomezana torohevitra ho an'ireo tovovavy izay namoy ireo malalany nandritra ireo fandripahana ny Hazaras […]
‘Tsy izay sainin'ireo olona akory no hampihemotra ahy’
Hamida Ali Hazara, mpikatroka sosialy sy politika ihany koa, dia angamba fantatra kokoa amin'ny maha-mpanorina ny Humat-e Niswa Foundation (HNF) azy, izay ahafahan'ireo vehivavy hazara hanatsara ny fiainany ara-pahasalamana, fanabeazana ary fanatanjahantena. Manampy ireo tovovavy hazaras ampolony ny HNF mba hahazo vatsim-pianarana hianarana any aminà anjerimanontolo any amin'ireo tanàndehibe ao Pakistana, Lahore ary Karachi.
Ny famakiana sakana goavana iray na roa ao anatin'ny tontolon'ireo fandraharahana no mety ho dingana lojika manaraka ho an'io mpisavalalana tsy hay lazaina io. Saingy ho anà vehivavy tokana anaty tontolo tena fehezin'ny fanjakan-dehilahy lalina, feno fandrika ny fitsofohana amin'ny sehatry ny indostrian'ny fampisakafoanana izay ny lehilahy no mibodo ny laka.
“Maneso sy manafoka ahy ireo namana sy ireo ray amandreny manodidina ahy noho ny safidim-pandraharahàko”, hoy i Hamida Ali Hazara tao anaty tafatafa tamin'ny finday nifanaovany tamin'ny Global Voices.
“Mifosa ahy any an-damosiko any ry zareo. Saingy tsy raharahaiko. Tsy izay sainin'ireo olona akory no hampihemotra ahy”
Hatramin'izao, resin'ireo fahombiazana ireo fahasarotana. Amin'ny sakafo antoandro sy hariva, sahirana ilay Trano Fisakafoanana amin'ny fandraisana ireo mpanjifa maro loatra. Mbola mahafinaritra hatrany ny fiovàna hitan'i Hamida Ali Hazara ao anatin'ny ekipany iray tsy mivaky.
“Be tsy miteny sy mangingina ny iray tamin'ireo mpiasa tany ampiandohana. [Nilaza izy] fa noho ireo olana ara-bola dia tsy afaka nanohy ireo fianarany. Efa teo ankatoky ny handàvana io dingana io izy. Nampian'ilay Trano Fisakafoanana izy mba hijoro. Sambatra aho ho azy,” hoy ny teniny.
Quetta amin'ny alina. Sary navoaka voalohany teo amin'ny Flickr-n'ny Beluchistan. CC BY-SA 2.0
Koa satria ny fanabeazana dia tanjona iray ho an'ireo mpiasany rehetra, mino i Hamida Ali Hazara fa io koa no tena antony fototra hahatonga ireo fandraisana anadraikitra toy ny azy hiafara amin'ny fahitana fanekena midadasika ao anaty vondrom-piarahamonina rehefa any amin'ny farany any. Amin'ny alalan'ny fanazavana ny heviny, namoaka izay mety ho tolotrasa voalohany mba hikendrena manokana ireo vehivavy tena matihanina ny orinasa iray mpanao mofo ao Quetta, tamin'ny volana lasa teo.
Ateveno ny ekipanay – tolotrasa ho mpikirakira vola ho anà vehivavy be herim-po
Midira ho isan'ny vola amin'ny orinasa sangany eto Quetta. Manolotra toerana iray mpikirakira vola ho anà vehivavy tena mpiasa mavitrika ny Trano Frantsay Fanaovana Mofo , miaraka amin'ny karama sy ireo tombontsoa tena mahasarika. Ato amin'ny Trano Frantsay Fanaovana Mofo, resy lahatra izahay fa tsy mety ho tafatsangana ny orinasa iray miroborobo raha tsy mitovy tombontsoa raisina ireo lehilahy sy vehivavy ao anaty toeram-piasana […]
“Niova ny fotoana”, hoy ny fanazavan'i Hamida Ali Hazara. “Taona maro lasa izay, voafetra ho anatin'ireo rindrina efatra ny fiainan'ireo vehivavy tao an-tanànan'i Hazara, saingy tapitra izany manomboka izao. Andalam-panovàna ny teotsain'ireo vehivavy ny fanabeazana.”
Toeram-pialofana azo antoka ao anaty tontolo iray mampididoza
Ny tsy fandriampahalemana no aretina izay manohy mampisy aloka amin'ireo orinasa ao Quetta, indrindra indrindra fa Hazaras no tompony. Tamin'ny 9 oktobra, nanao tatitra ireo media pakistaney, fa Hazaras ny telo tamin'ireo dimy maty noho ny tifitry ny mpitandro filaminana izay nokilasiana ho noho ny fanavakavahana ara-pinoana.
Nitarika Hazaras roapolo mahery hanao fisaonana teny an-dalamben'i Mizan Chowk tao Quetta io loza io, mba hanoherana ny fitombon'ireo herisetra atao amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo. Toy ny ao Afganistàna, kendren'ireo mahery fihetsika ao Pakistàna hatrany ireo Hazaras shiita, izay heverin'izy ireo fa mivadi-pinoana.
Ireo tahotra ny mety hisian'ireo herisetra no manosika ireo mpikambana ao amin'io vondrom-piarahamonina io hanorina ny orinasan'izy ireo any amin'ireo faritra toa ny ao an-tanànan'i Hazara, izay ry zareo no maro an'isa. Nofidian'ny mpisavalàlana mpanorina ny Toeram-pisakafoanana Hazara ny Aliabad Road ho toeram-panorenana mendrika, fa tsy ireo tsena be olona, voalohany indrindra dia nh ny antony fandriampahalemana.
Saingy raha mbola feno loza sy olana ny tontolo ivelany, ny Trano Fisakafoanana Hazara kosa dia toerana masina. Eto, afaka mifanakalo hevitra, mifandamina sy mahazo aina i Hamida Ali Hazara sy ny vondrom-piarahamoniny. Ary ankoatra izay, araka ny hevitry ny maro, matsiro koa ny sakafo ao.
Tantaran'ny Afganistana farany
2 herinandro izayAzia Afovoany sy Kaokazy
4 herinandro izayAmerika Avaratra
Inona no diso amin'ny fampitahana ara-politika an'i Taiwan amin'i Afghanistan?
06 Jolay 2020Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Mbola eo ampelatanan'ny manampahefana Iraniana ny ain'ny mpifindra monina Afghana